musha > Travel Europe > Best Canal And River Boat Holidays In Europe
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Vafambi kutsvaga Best Canal uye River Boat Holidays mu Europe azorore nyore achiziva Europe ine terrific zvinotyisa. zvisinei, kuziva kwekuenda nokuti zvakanaka chaienda zororo nokusingaperi, unofanira kuita zvimwe tsvakurudzo. Kune nyika shanu chete tarenda Canal uye chikepe pazororo mikana.
Unogona kuvashanyira zvose, kana kusarudza uyo kukufadza dzakawanda. Chii vamwe ndechokuti uchazova vamwe yakakurumbira Canal uye rwizi anokwira mazororo izvi. Heano yedu pamusoro shanu yakanakisisa Canal uye chikepe mazororo mu Europe:
Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train The CHEAPEST Train Tickets Website In The World.
1. Canal uye River Boat Holidays mu Furanzi
France iri nyika yakanaka yakawanda zvikwanisike dzakasiyana nokuda mugero kana chikepe zororo. Zvishomanana kumatunhu romuFrance aunonyanya panyaya: ari midi, dunhu reAkitaine, uye Camargue. Mumwe nomumwe wavo ane nemamwe unhu.
The yokutanga Canal Du midi, Nyika Heritage Site uye mukuru chakagadzirwa gang mu Europe kuti achiri kunotevera kosi yacho yepakutanga. Iri basa raPierre Paul Riquet rakapedzwa mu 1681. Munziramo, cruising pasi midi, unogona kuona Le Somail uye Carcassonne, maviri fadza Ages misha. Uye kana uchida chikafu Chakanaka uye waini zvikuru, unogona kuedza midi wakakurumbira Minervois uye Corbieres, uye cassoulet, munhu zvomunharaunda delicacy.
Southern romuFrance Camargue iri zvishoma kupfuura ano, ane yakanaka emusi okunze uye pedyo negungwa reMediterranean. Paunenge aifamba Camargue, unogona kudzidza zvakasvibirira hunhu uye birdlife. Chii chimwe, mumaguta nzvimbo panewo fadza shoma cafes kuona.
pakupedzisira, Aquitania achaita andobata mwoyo wako paunenge Cruise kuburikidza luscious mumipata ayo, tarisa mapopoma ayo uye mukare mawere. Pane vazhinji nzira kutora, kusanganisira nechikepe pasi Rwizi Charente. In France, nzira dzose iwe tora iri enchanting, uye kuona kwazvo kunzwa anoshamisa.
2. Canal uye River Boat Holidays mu Itari
Paunofunga hova uye Italy, ari changouya mumusoro iri Venice. The Venetian the lagoon yakakura, kucheka pamwe migero, uye rinopa rakasiyana ruzivo vafambi vanoda Supreme. Asi kunyange kupfuura nechikepe kuti migero yose Venice pachayo, rokuItari pamhenderekedzo iri zvinosimbisa pacharo.
For Mutange, unogona kushanyira enchanting zviwi Torcello, Burano, uye Murano kuti vane zvakawanda kupa. Kana uchida, kupedza nguva mune imwe dzavo zhinji nyanzvi zvitoro. Kana zvisiri, unogona nguva dzose ichifamba kuguta Venice pachayo. gang ose ari akanaka ikoko, kunyanya kana mamiriro ekunze akanaka. Anozodzidza River Brenta kana Sile River mamwe yevedza Tours of Italian mumaruwa.
Italy hwakava zvakawanda kupa munzizi ayo akanaka, uye migero yose Venice uri anofanira-kuona. Kana uchida kuona zvakanakisisa European zvinotyisa uye pezvinhu waterways, uchaona navo Italy.
Florence kuna Pisa Zvitima
3. Canal uye River Boat Holidays mu Jerimani
Germany Varege pakutanga unofunga kana yakanakisisa Canal uye chikepe mazororo mu Europe anotaurwa. zvisinei, nyika iri kure kushayikwa waterways yakanaka kuongorora. kumatunhu maviri mira kubva zororo: Mecklenburg uye Brandenburg, dzavo fadza canal madhamu vakapoteredzwa akasvibirira masango.
Chii kunyanya fadza ndechokuti munzira unogona kuona dzinokatyamadza dzoushe, Ages nematende, uye sokunofadza maguta ekare. Uye avo vanoda zvisikwa pasina mubvunzo vanonakidzwa neisina kusvibiswa renje uye kupfuma kwemhuka dzesango.
Berlin pacharwo zvakawanda mabhiriji kupfuura kunyange Venice anoita, uye akapotsa 100 migero kuongorora. zvisinei, wako Canal German uye chikepe yezororo uchinzvera rinogonawo kutora iwe kuna Potsdam uye Brandenburg. Regai kurasikirwa nemukana riongorore Germany iyi yakasiyana nedzimwe uye chinozorodza nzira.
Berlin kuna Potsdam Zvitima
Berlin kuna Hamburg Zvitima
Belgium ine bhonasi huru parutivi rwayo kana zvasvika kune yakanakisa canal uye zororo rerwizi muEurope. bhonasi Ndiwo Flemish nharaunda uye runako waterways ayo. Nepo waterways zveBelgium havasi zvetsika mupfungwa kupa mukare mumaruwa zvinokukanganisa, vanogona zvirokwazvo kutora kuti dzimwe zvinofadza nzvimbo.
Semuyenzaniso, Bruges zvechokwadi unokosha kushanyira, uye famba parutivi migero tande kunyange zvinonakidza. Iko kune kumwe kudanana mumhepo yeBruges, zvakafanana neVenice. Zvino fadza Ages hurongwa uye chokoreti zvitoro chete kuwedzera chadenga.
Zvadaro pane Ypres, zvinoshamisa nzvimbo izere dzakaitika kukosha uye akasiyana Flemish zvinotyisa, ruzha, uye siyana. Maseiri ako nzira kuna inonaka zveBelgium dzakaitwa nemaoko Chocolates, kana vakagwinya uye akasimba beers zveBelgium. Nyika ichakugamuchira nemufaro wakachena kune ese manzwiro.
Hapana runyorwa rweiyo yakanakisisa dzokugara European anogona kuva wakakwana pasina Netherlands. Izvozvo zvinosanganisira dzokugara kuti ape yakanakisisa gwara uye chikepe mazororo mu Europe. Nyika waterways vaifanira kuwana nzvimbo yayo pachikwata, nokuda kwayo dzinokatyamadza maonero, yevedza migwagwa, uye kudekara uye norunyararo dzengarava.
The Dutch mumaruwa uye ayo waterways chipiriso chiitiko chikuru. Zvichida hapana imwe nzvimbo inogona kuzvirumbidza kuburikidza nekufamba nechikepe misha midiki uye padivi pezvakanyanya kunaka. Fungidzira achipfuura chinyakare-achitarisa Dutch mahwindimiri, dzavo kucherechedzwa nechitarisiko norunako. fungidzira kutarisa tulips Kuzungunuka ari kamhepo apo achipfuura Frisian nharaunda.
Kuronga chikepe Vacation mu Europe? Book Your Train Tickets pamwe Save A Train uye vanakidzwe!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#canal #chikepe #rwendo europetrains eurotrip trainjourney
Sei Chausingafaniri Kupotsa European Train Service